Jadwalka Casharada Fogaan-darsiga ee Dugsiyada Hoose iyo Dhaxe oo laga baahinayo Warbaahinta Qaranka “SAWIRRO” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Jadwalka Casharada Fogaan-darsiga ee Dugsiyada Hoose iyo Dhaxe oo laga baahinayo Warbaahinta...
Wasaaraddaha Waxbarashada iyo Warfaafinta ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay casharada Fogaan-darsiga ee Dugsiyada Hoose iyo Dhaxe, taasi oo si maalinle ah looga baahin doono Radio Muqdisho iyo baraha arimaha bulshada ee Telefishinka Qaranka iyo Raadiyaha.
Munasaabadda lagu shaacinayey Jadwalka waxa goob joog ahaa Agaasimayaasha guud ee Labada Wasaaradood iyo Agaasimayaasha Telefishinka Qaranka iyo Radio Muqdisho.
Wasaaradda Waxbarashada Qaranka ayaa hindistay in Warbaahinta Qaranka laga siidaayo casharada Fogaan-darsiga oo waafaqsan Manhajka Qaranka, kadib xayiraadihii COVID-19 ee sanadkii hore sida uu sharxay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Maxamed Caabi Xasan oo tilmaamay in ardaydu ay baahi weyn u qabaan helidda casharada fogaan darsiga.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdinaasir Xuseen ayaa ballanqaaday in Wasaaraddu doorkeeda qaadanayso si xiriir ahna casharadda looga tebin doono Warbaahinta Qaranka, kaasi oo ay si fudud ugu faa’iideysan doonaan dhamaan ardayda Soomaaliyeed.
Previous articleWasiirka Cadaaladda oo kulan afur ah u sameeyay Taliska ciidanka Asluubta “SAWIRRO”
Next articleMidowga Afrika oo Soomaaliya u soo magcaabay ergay kala shaqeeya arrimaha doorashooyinka